Dawladda Maraykanka & Qaramada Midoobey oo soo dhoweeyey magcaabista R/wasaaraha cusub ee Somaliya. – Radio Daljir
Nairobi, June 25 – War-saxaafadeed ay soo saartay safaarada Maraykanka ee magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in dawladda Maraykanku ay soo dhoweyneyso magacaabis R/wasaaraha cusub ee dawladda federal KMG ah ee Soomaaliya Prof. C/weli Maxamed Cali ?Gaas?.
Dawladda Maraykanka ayaa ballan ku qaaday in ay la shaqayn-doonto ra?iisul-wasaare C/weli Maxamed Cali, si loo dardargeliyo hawlaha xilliga kala guurka ah ee horyaalla dawladdiisa.
Dawladda Maraykanka ayaa ugu baaqday golaha baarlamaanka Soomaaliya in ay meel-mariyaan R/wasaaraha cusub ee uu dhawaan magacaay M/weyne Shariif Sh Axmed, si uu isna u soo magacaabo xukuumad dhakhsiyo leh.
Maraykanka ayaa sidoo kale ku cel-celiyeyy baahida deg-degga ah ee loo qabo dhaqan-galinta heshiiskii heshiiskii Kampala ee uu garwadeenka ka ahaa wakiilka gaarka ah ee xog-hayaga guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya kaasoo dhigayey in 12-ka bilood ee soo socda la qabto hawlo muhiim ah oo dawladda hortaallay kuwaasi oo ay ugu weynayd dhamaystirka dastuurka qabyada ah , hufnaan maaliyadeed oo la xoojiyo iyo is-baddal lagu sameeyo baarlamaanka Soomaaliya iyo hay?adaha kale ee dawladda.
Dawladda Maraykanka ayaa sidoo kale ku baaqday in dib u hagaajin lagu sameeyo hay?adaha amniga ee dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya si aysan meesha uga baxeen dhlkii iyi deegaannadii cusbaa ee dawladda ay Al-shabaab kala wareegtay.
Maraykanka ayaa dalbaday sidoo kale in lasameeyo hormar dhinac siyaasadda ah, dadaallo dib u heshiisiineed yo in doorashooyin la galo ka hor bisha August ee sannadka soo socda ee 2012-ka, waxaana Maraykanku hoosta xariiqay in loo baahanyahay in shirka wadatashiga ee arrimaha Somalia la qabto ka hor dhammaadak bisha July iyadoo lagu soo darayo jilayaasha siyaasadeed ee Somalia oo ay ka mid yihiin Somaliland, Puntland, Galmudug, Ahlu-sunna Waljamaaca iyo bulshada rayadka ah.
Dhanka kalena Wakiilka Xog-hayaha guud ee QM u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa xafiiska siyaasada ee Soomaaliya (UNPOS) Dr. Augustine P. Mahiga ayaa soo dhoweeyey R/wasaaraha Cusub ee Somalia mudane Prof. C/weli Maxamed Cali.
Hadalka uu soo saaray xafiiska siyaasadda ee Somalia xaruntiisu tahay magaalada Nairobi (UNPOS) ayaa lagu sheegayay in Mahiga uu u hanbalyeynayo ra?iisul-wasaaraha cusub ee Somalia islamrkaana u ballan-qaadayo in taageerada jimciyadda loo dhanyahay isagoioo sheegay in ay la yeelan doonaan wada-shaqayn dhaw.
Mr. Mahiga ayaa u rajeeyey in R/wasaaraha iyo golaha wasiirrada ee uu soo dhissidoono ay taageero ka helidoonaan baarlamaanka Somalia, waxana uu ku cnuux-nuuxsaday muhiimadda ay leedahay in dhinacyada dawladdu isla shaqeeyaan, si loo kala horraysiiyo hawlaha baaxadda leh ee dawladda horyaalla.
Ugu damayntiina Mahiga, ayaa xaqiijiyey in dawladda TFG-da iyo wakiillada maamullada iyo ururrada Soomaaliya ka jira ay iyagoo taageero ka helaya Midowda Africa AU, IGAD iyo UNPOS ay diyaarindoonaan tubta nabadda ee Soomaaliya Road-Map, waxana ay tubtaan nabaddu ka turjumeysaa dhamaystirka xilliga ku meelgaarka ah ee Somalia waxana lagu wadaatub-nabadeedkaasi in aysaamileyda arrimaha Soomaalidu ay gorfeeyaan dhamaadka bisha July marka la qabanayo shirka wadatashiga ah.